Clifton Comfort - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArshad
Amagumbi akhuselweyo akhuselekileyo, azimele ngokupheleleyo kwigumbi eli-1 lebhedi, lihonjiswe kakuhle, libekwe kwindawo efanelekileyo, iyahambelana neCovid, umntwana kunye nosana olunobuhlobo.
Ngazo zonke izinto eziyimfuneko, ezihonjiswe ngokudityaniswa kwefenitshala yamandulo kunye neyanamhlanje. I-Smart TV 42", iNetflix exhasa iWiFi, igadi ekhuselekileyo yentendelezo eneendawo zokuhlala.
Indawo eyodwa, enoxolo, umbane phantse ungaphazanyiswa. Eyona ndawo idumileyo enazo zonke izinto eziluncedo kunye nezinto ezinomtsalane kumgama wokuhamba, ngamava akhumbulekayo.
Ibekwe kumagumbi adityanisiweyo, anegadi, indawo yokupaka kunye noonogada kuwo omabini amasango. Indawo ikhululekile kwi-load shedding yombane, ngokuba yindawo yokhuseleko oluphezulu lwe-VIP, yenza ukuba ibe yodwa phakathi kwezinye iindawo eClifton. Ixhotyiswe nge-UPS yeNkqubo yokuNika amandla eNgaphazanyiswayo kwiimeko ezingxamisekileyo. Ibhlokhi yaseClifton "3" yahlukile kweyona ndawo inoxolo, ikhuselekile kunye nendawo yokuhlala esulungekileyo, ekufutshane kakhulu kuzo zonke izinto eziluncedo; uninzi lweeofisi ezidumileyo, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, unxweme lolwandle, iipaki ezinkulu, iindlela ezibanzi, kude nengxinano. Ngokuhlwa, impepho emnandi yaselwandle yomoya omtsha iyenza ibe yindawo yokuhlala eKarachi.
Indawo yaseClifton likhaya kwezona ofisi zibalulekileyo ngokunjalo; iindawo zokuthenga, zokutyela kunye nezolonwabo (Iiklabhu, iiPaki kunye nolwandle ⛱️).
Ngokungathandabuzekiyo yeyona ndawo ibanzi kwaye ibiza kakhulu eKarachi, kodwa ukuba kufutshane nendawo yokuhlala ka-Ex umongameli uMnu Zardari, uyonwabela i-diplomatic enclave njengokhuseleko kunye, phantse ungaphazanyiswa unikezelo lombane olufunekayo kwi-air-conditioning. Indawo yokuhlala ikufuphi nenkundla, kunye nokhuseleko lweeyure ezingama-24. Ukukhwela kunye nokukhupha i-cab, kwenziwa ngaphakathi kwendawo yokuhlala - INTO ebaluleke kakhulu.
Ipaki enkulu eluhlaza eluhlaza ebizwa ngokuba yi "Bagh Ibn e Qasim", ijongene ngqo nesakhiwo sezindlu. Unxweme lwaseKarachi lungaphantsi kwesiqingatha sekhilomitha. Ungcoliseko olumnandi impepho ekhululekile yolwandle, sisipho esincomekayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Arshad
Ihlala ikhona ngalo naluphi na uncedo okanye isikhokelo.